Elu-na-akwọ ụgbọala katapila SD7N - China Xuanhua Construction Machinery
SD7N katapila bụ 230 horsepower track-ụdị dozer na elu sprocket, ike mgbanwe mbanye, ọkara isiike kwụsịtụrụ na haịdrọlik njikwa. SD7-230 horsepower, elu sprocket katapila iwekota na modular imewe dị mfe ịrụzi & mmezi, Ọ aka mmanụ dị iche nsogbu, na haịdrọlik usoro anamde echebe gburugburu ebe obibi na ịzọpụta ike na-elu na-arụ ọrụ arụmọrụ. Safety ala na ime ọnọdụ, electric nlekota na ROPS ụlọ na pụrụ ịdabere dum quality ...
SD7N katapila bụ 230 horsepower track-ụdị dozer na elu sprocket, ike mgbanwe mbanye, ọkara isiike kwụsịtụrụ na haịdrọlik njikwa.
SD7-230 horsepower, elu sprocket katapila iwekota na modular imewe dị mfe ịrụzi & mmezi, Ọ aka mmanụ dị iche nsogbu, na haịdrọlik usoro anamde echebe gburugburu ebe obibi na ịzọpụta ike na-elu na-arụ ọrụ arụmọrụ. Safety ala na ime ọnọdụ, electric nlekota na ROPS ụlọ na pụrụ ịdabere dum quality, magburu onwe ya na ozi dị gị maara ihe nhọrọ.
(bụghị tinyere Ripper) Operation ibu ( n'arọ) 23800
Ground nsogbu (K Pa ) 71.9
Min. ala nwechapụ (mm) 404
Ụra iburu gị ike ( m ³) 8.4
N'ozuzu akụkụ ( mm ) 5677× 3500× 3 402
(gụnyere Ripper) 7616 × 3500× 3 402
Pịnye Cummins N TA 855-c 280S10
Gosiri mmanụ ụgbọala oriri (g / KW • h) ≤ 235
T ọ sprocket na-elu-agbanwe kwụsịtụrụ.
Max. usoro mgbali (MPa) 18.6
Mgbapụta ụdị High mgbali Kwadobe imipu
T orque Ntụgharị torque Ntụgharị bụ ike kewara haịdrọlik-arụ ụgbọ ụdị
S teering ipigide. The n'iru ipigide haịdrọlik enwe, na-emekarị iche ipigide.
Braking ipigide The braking ipigide-enwe site spring, iche haịdrọlik, meshed ụdị.
F inal ụgbọala ikpeazụ mbanye bụ abụọ-ogbo mbara Mbelata gia usoro, ikwommiri lubrication.
Previous: Multi-ọrụ katapila SD7LGP
Next: Elu-na-akwọ ụgbọala katapila SD8N
320hp crawler katapila
320hp High Track katapila
80hp Small Track katapila
Brand New Engine katapila Sd16
katapila Track Sprocket
Cat D5h crawler katapila
Katapila katapila D9r
Katapila D6 katapila
Factory Direct Sale Track katapila
Hbxg High Track katapila Sd08
Hbxg Track katapila 320hp
metal Toy katapila
New Track Katapila
rụzigharịa katapila Sd16
Shantui katapila N'ihi Sale
Obere crawler katapila
Ji katapila Cat D9r
Ji katapila D5k
mee katapila egwu
Ji Cat katapila D6m
Ji Cat katapila D7
Ji Cat katapila D9
Ji Cat D5h katapila
Ji Cat D5n katapila
Ji Cat D6g katapila
Ji Katapila D6g katapila
Ji D65p katapila
Apiti katapila TYS165-3
Apiti katapila SD7LGP